Ukuhlaziywa kweChina kokuhluleka okuvamile komkhiqizi we-hydraulic synchronous Manufacturer and Supplier | Guorui
Ukuhlaziywa kokuhluleka okuvamile kwama-motor wokubacindezela okuvumelanayo
Isici esiyinhloko esithinta iphutha lokuvumelanisa lemoto yokuvumelanisa Imoto yokuvumelanisa yakhiwe ngamamoto amaningana ngokunemba okuphezulu kwemishini nosayizi ofanayo. Usayizi ofanayo nokunemba okuphezulu kwemishini kwenza ukugeleza (ukufuduka) ngensimbi ngayinye kucishe kufane. Ngaphezu kwalokho, ngoba indawo enqamulelayo (noma ukufuduswa) kwe-actuator iyafana, ukuvumelanisa isivinini kuyatholakala. Ama-motor synchronous anokunemba okuphezulu, kepha kusekhona amaphutha asobala ekusetshenzisweni kwangempela. Ukunemba kokuvumelanisa kuthinteka ikakhulu yizici ezilandelayo:
1) Machining nokunemba izinjini kanye actuators;
3) Ukuhlelwa kwepayipi;
4) Okuqukethwe igesi phakathi.
Ngenxa yezizathu ezingenhla, kunamaphutha asobala ekusetshenzisweni kwangempela kwama-motor ahambisanayo. Ngakho-ke, ukuze uxazulule iphutha lokuvumelanisa lemoto yokuvumelanisa, kuyadingeka ukuxazulula lezi zinkinga ezingenhla bese usebenzisa i-motor ehambisanayo kahle nangendlela efanele.
Izinyathelo zokuqeda amaphutha wokuvumelanisa
1.Choosing a motor zokuvumelanisa nge high ukucutshungulwa nokunemba kanye ukucutshungulwa nokunemba actuator motor zokuvumelanisa kanye actuator inquma ukunemba ukuvumelanisa kohlelo. Ngakho-ke, ukukhetha umenzi ofanele kuyinkinga ebalulekile. Uma ukunemba kwengxenye kuqinisekisiwe, ukunemba kokuvumelanisa kohlelo kungaqinisekiswa kalula. Ukufuduka kwemishini yokuvumelanisa kuyafana, futhi indawo enqamulelayo ye-actuator iyefana, futhi ukunemba kokuvumelanisa kuthuthukiswe kakhulu.
2. Susa iphutha lokuqoqeka lemoto ehambisanayo
Yize ukunemba kwemishini kwe-motor ehambisanayo kuphakeme kakhulu, akunakufana ncamashi. Uma isilinganiso sokugeleza sikhulu, isilinganiso sokugeleza sihlala sikhulu, okusho ukuthi, iphutha eliqoqayo lokunemba kokuvumelanisa lizokwenziwa. Ikakhulukazi lapho ukuhamba kwe-actuator kungaphakathi kobubanzi bokuhamba, leli phutha lokuqoqa likhulu kakhulu. Kungabonakala kusuka ku-Figure 1 ukuthi, kusifunda ngasinye samafutha ngaphakathi kwemoto ehambisanayo, kuneqembu le-valve eliqukethe i-valve yokuchichima 2 ne-valve yendlela eyodwa 3. Leli qembu le-valve lisethelwe ukuqeda iphutha le-asynchrony yesikhundla. Imoto yokuvumelanisa ngokuvamile idinga ukulawula ama-actuator amaningana.
Ukukhetha ihhashi 3.Synchronous nomthwalo ofanayo
I-valve yokusiza yemoto ehambisanayo ingaqeda iphutha lokuvumelanisa ngasikhathi sinye, futhi singabona nokuthi ingcindezi ebekwe yi-valve yokusiza nayo iyinto ebaluleke kakhulu. Ukuhlelwa kwayo kwengcindezi kufanele kufane nomthwalo. Uma ingcindezi isethwe kakhulu, iphutha lokuvumelanisa alikwazi ukuqedwa; uma ingcindezi isethwe iphansi kakhulu, umthwalo awufani. Lapho amanye ama-actuator ecindezela umthwalo omkhulu, uwoyela wokucindezela uzoba ingcindezi ephezulu, kuthi i-valve yokuchichima iyoqala Ukuchichima. Ngale ndlela, ama-actuator amaningana azokwehla enyuka, okuzodala i-asynchrony enkulu, futhi kungadala nezingozi zemishini. Ngakho-ke, okokuqala, hlola ukuthi umthwalo awunakubandlulula ngokweqile, futhi okwesibili, setha ingcindezi yokuchichima kwe-valve yokuchichima yemoto ehambisanayo.
4. Amahhashi ahambisanayo athinteka ukucindezela kwepayipi
Ukulungiswa kwepayipi kusuka esikhumulweni semoto esivumelanisiwe kuya ku-actuator nakho kufanele kucace, ngaphandle kwalokho kuzoba nomthelela. Ngoba ukulahleka kwengcindezi kwepayipi nakho kukhulu ngokuqhathaniswa, lapho lokhu kulahleka kwengcindezi kuhlanganiswa nokuphambuka komthwalo, kuzokwenziwa ingcindezi ephezulu kakhulu ngaphakathi kwepayipi. Uma umehluko wengcindezi phakathi kokungena nokuphuma kwemoto ushintsha kakhulu, khona-ke Ngejubane elifanayo, ukuhamba kwezimoto kuyashintsha. Ngakho-ke, sizama konke okusemandleni ukulungisa ibanga, ifomu lendololwane, ububanzi bepayipi, njll.